I-MarketingPilot: IMicrosoft Dynamics CRM yoLawulo lweNtengiso eDityanisiweyo | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 15, 2013 NgoMvulo, Oktobha 14, 2013 Douglas Karr
IMicrosoft Dynamics CRM kwaye IntengisoPilot ikunike ukuqonda okudingayo ukuze uqonde ngcono abathengi bakho. Ngokuziphatha okunamandla kunye nentengiso kubahlalutyi, unokujolisa ngokulula kwaye uhlukanise abathengi bakho, uqonde ukuba yintoni abanomdla kuyo, kwaye emva koko ubabandakanye ngexesha elifanelekileyo ngomyalezo olungileyo. IMicrosoft Dynamics CRM kunye neMarketPilot ihambisa ishishini ngokwentengiso kunye nolawulo lwephulo elininzi.
Ulawulo oluhlanganisiweyo lwentengiso -Zenzekelayo kwaye ulungelelanise imisebenzi yakho yokuthengisa ngezixhobo zolawulo ezinamandla, zokuphela kokuphela ezenzelwe ukunceda amashishini kunye neearhente zicwangcise, zenze, kwaye zilandelele ukuthengisa kwazo ngokufanelekileyo.
Ulawulo lwezixhobo zokuthengisa -Gcina amaqela akho esebenzisana kwaye uqiniseke ukuba izixhobo ezifanelekileyo zikwiiprojekthi ezifanelekileyo.
Uhlahlo lwabiwo-mali -Fumana ukuqonda kwexesha-lokwenyani kwinkcitho yenkcitho kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kunye noqikelelo ngokuchanekileyo.
Ulawulo lwephulo -Lungelelanisa ngcono ukuthengisa kunye nokuphucula ukusebenza kwe-automation yamajelo amaninzi.
Ukuthengwa kweendaba kunye nokucwangcisa Cwangcisa, thelekisa, kwaye udibanise ishishini lakho lokuthenga ngokulula ngakumbi kunangaphambili.
Izisombululo zearhente -Yenzelwe inkonzo epheleleyo, ukuthengwa kwemithombo yeendaba, ubuchule bokuthengisa, intengiso, umsitho, amava, i-PR kunye neearhente zokuphendula ngokuthe ngqo, izisombululo zeNtengisoPilot zilungelelanisa ukusebenza kunye nokuphucula imveliso kunye nenzuzo ngaphaya kweenkqubo zolawulo lwearhente yemveli.
tags: intengisomicrosoftIMicrosoft crmIMicrosoft DynamicsiMicrosoft Dynamics crm